चारैतिर रविको चर्चा देखेपछि, दुइ छोरीसहित अमेरिकामा बसेकी रविकी पूर्व पत्नीले यसो भनिन् ! – Nepal Insider
भोलि १७ वटा नेपालीको श’व मलेसियादेखि नेपाल ल्या’इने !
PLEASE मेरो बहिनी लाई बचाइ दिनुहोस् म बिन्ती गर्छु।यो पोस्ट लाई सक्दो शेयर गरी भाग्य न्यौपाने सामु पुर्याई दिनु होला।
सेनामा ‘जंगल वा’रफेयर’ तालिम पुरा गर्ने पहिलो महिला सै’निक बनिन् राधिका
दाङमा एक्ली युवतीमात्र भएको थाहा पाएर एक पुरुष कोठाभित्र छिरे, अनैतिक काम गर्न खोज्दा युवतीले लगाइन् यस्तो उपाय
चार राशि भएका ती व्यक्ति,जसले कमाउँछन् करो’डौ सम्पति
मुख्य पृष्ठ /समाचार/चारैतिर रविको चर्चा देखेपछि, दुइ छोरीसहित अमेरिकामा बसेकी रविकी पूर्व पत्नीले यसो भनिन् !
चारैतिर रविको चर्चा देखेपछि, दुइ छोरीसहित अमेरिकामा बसेकी रविकी पूर्व पत्नीले यसो भनिन् !
पछिल्लो समय सालिकराम प्रकरणको कारण टेलिभिजन कार्यक्रमका चर्चित प्रस्तोता पत्रकार रवि लामिछाने चर्चामा छन् । लामिछानेको चर्चा सालिकराम पुडासैनीको प्रकरणले मात्र हुने गरेको छैन । उनको चर्चा धेरै पहिले देखिनै बिभिन्न काम र कारणले चर्चा भैरहने गरेको थियो । उनले गरेका राम्रा कामको चर्चा पहिले यति धेरै नभए पनि पछिल्लो समय ‘सिधा कुरा जनतासंग’ को कार्यक्रमले उनलाई निकै उचाइमा पुर्यायो । उनलाई यो उचाइमा पुर्याएसंगै उनको अर्को चर्चा हुरीबतास जस्तै आइदियो त्यो थियो आफ्नै श्रीमतीका सम्बन्धका कारण ।
केहि समय अघि उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भएको थियो जसका कारण रविलाई विवादमा ल्याउन खोजेको थियो तर पनि यो अवस्थालाइ रविले सजिलै सम्हाल्न सके । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतबाट पाँच लाख धरौटीमा छुटेका लामिछानेप्रति लक्षित गरी पूर्व पत्नी ईशा लामिछानेले व्यंग्य गरेकी छिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटसमा लेखेकी छिन्– ‘मान्छेको चपाउने दाँत छुट्टै र देखाउने दाँत छुट्टै हुन्छ भन्थे हो रहिछ ।’ रविले आफ्नो समर्थनमा जुटेकाहरुलाई जेलबाट छुटेपछि फूलमाला र अविर लगाएर नारायणी नदी किनारामा ‘धन्यवाद सभा’ दिए । तर, पूर्व पत्नी ईशाले भने उल्टै व्यङ्ग्य गरिन् । सन् २०१८ मा उनीहरुले २५ वर्षको वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य गरेका थिए ।
सालिकराम प्रकरणमा हिरासतवाट मुक्त भएको तेस्रो दिन बुधबार सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी काठमाडौं आउने सूचना पाएपछि नै रविका समर्थकको काठमाडौं स्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा समर्थकको भिड लागेको थियो । उनलाई स्वागत गर्न सयौं मानिस विमानस्थल पुगेका थिए । पञ्चेवाजा समेत लिएर पुगेका समर्थकको भिड ब्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । चितवनवाट काठमामाडौं आएका रवि विमानस्थलबाट बाहिरिँदा पञ्चेवाजा सहित पुगेका उनका स्वागत गरेका थिए । रविको समर्थकमा नारासमेत लगाएका थिए ।
विमानस्थलमा उत्रिए पछि आफ्ना समर्थकलाई संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै लामिछानेले हिरासतको जीवनले आफुले राम्रो पाठ सिकाएको बताए । उनले मरिसकेको मानिसलाई प्रयोग गरेर आफु विरुद्ध षडयन्त्र भएको भन्दै यति सम्म हुन्छहोला भन्ने आफुले नसोचेको बताए ।
विमानस्थलमा पुगेका सञ्चाकर्मीहरुले शालिकराम पुडाशैनीको परिवारका सदस्यका बारेमा तपाईको के धारणा छ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले पुडाशैनीको परिवार प्रति समवेदना ब्यक्त गरे । उनले भने, उहाँहरुको परिवारमा भएको क्षति प्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु । परिवारमा जुन बिपत्ती आएको छ त्यसमा हामी पनि दुखी छौं । मैले यस अघि पनि भनेको थिए । अहिले पनि त्यही भन्न चाहन्छु ।
उनले आफ्नो समर्थनमा प्रदर्शन गरेका समर्थकहरुको मायाले थप जिम्मेवार बनाएको बताए । उनले विशेष तयारी गरिरहेको बताए । उनले हिरासतको वसाईमा थप उर्जा मिलेको बताएका छन् । उनले समाचारमा आएका हेडलाइनलाई पनि प्रतिकृया दिएका छन् । उनले राजनीतिमा लाग्ने आफ्नो तत्काल कुनै योजना नभएको बताएका छन् । तर पनि भोलीको बारेमा अहिले केही भन्न नसकिने बताए ।
कोरोना र राजस्व अभावबाट हारेको सरकारले सलहको संकट समाधान कसरी गर्ला भन्ने चिन्ता थपियो
Breaking…डा. केसीको स्वास्थ्य ग’म्भीर बन्दै, सास फेर्न गा’ह्रो पछि अक्सिजन दिन शुरु ! – उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सक्दो शेयर गरौँ !
कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि कडाई गर्ने सरकारको संकेत, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह
नेपालबारे अनर्गल प्रचार गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमलाई साइजमा ल्याउने सरकारको निर्णय